शुक्रबार, ५ कार्तिक, २०७३ मा प्रकाशित,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए पछि नेपाली राजनीति लोकमानसिंह माथि केन्द्रीत बनेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले कात्तिक ३ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु समेत अफ्ठायारोमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि अर्को एक पटक धर्मसंकटमा परेको चर्चा चल्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले महाअभियोग प्रस्तवका प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तु छ उक्त कुराकानीको केही अंश :
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोगले त तपाईको पार्टी भित्र तरङ्ग उत्पन्न गर्यो भनिन्छ नि ?
यो अति महत्वपूर्ण विषय हो । पार्टीमा कुनै संस्थागत निर्णय भएर हामीले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिएनौँ । यसैले पनि पार्टी भित्र केही चर्चा चल्न सक्छ , तर पार्टीमा कुनै अन्योल छैन ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त पार्टी र मसंग कुनै सल्लाह नगरी केही सांसदहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए भन्ने गुनासो सहितको आक्रोश पोख्न थाल्नु भएको छ नि त ?
हो, पार्टीमा यसबारे कुनै सल्लाह भएको छैन । अध्यक्षसंग पनि कुनै सल्लाह गरिएको होइन । जनताका पक्षमा , न्यायका पक्षमा , विधिका पक्षमा हामीले कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका हौँ । हामी देश र जनताका पक्षमा छौँ ।
यो प्रकरणलाई पार्टी अध्यक्षले कटवाल प्रकरणसंग जोड्दै अत्यन्तै तनावमा हुनुहुन्छ भनिन्छ नि ?
रुगमाङ्गत कटवाल प्रकरण र यो प्रकरणमा धेरै अन्तर छ । यो जनताका लागि हामीले छेड्न खोजेको अभियान हो । यसले पार्टी अध्यक्षलाई कुनै अफ्ठयारो पारेको छैन् । बजारमा अनेक किसिमका हल्लाहरु आएका मात्रै हुन ।
तपाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ , महाअभियोग लगाउन संमन्वयनकारी भूमिका खेल्नुभएका अर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारवाही गर्ने मनस्थितिमा दाहाल पुग्नु भएको खबरहरु बाहिर आएका छन ?
यी सब हल्ला मात्र हुन । हल्लाका पछाडि नलागौँ । कार्कीमाथिको महाअभियोग पारित हुन्छ ।
चर्चामा आएजस्तै मन्त्री शर्मालाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्नु भयो भने ?
तपाईले न्याय र विधिका लागि लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग ल्याएको भन्दैहुनुहुन्छ , ०६२ – ६३ को आन्दोलन दवाउन मुख्य भूमिकाका आरोपी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन पार्टी अध्यक्ष दाहालले पहल गर्दा विधि र कानूनको हेक्का तपाईहरुलाई किन नभएको ?
माओवादीले मात्र उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको थिएन । कांग्रेस र एमालेले पनि सहमति गरेका थिए । कुनै मान्छेले आफूलाई सुधार गर्न खोज्छ भने मौका दिनु पनि पर्छ भन्ने पनि हो नि ।
बजारमा त दाहालले कार्कीबाट ठूलो रकम बुझेर आफूहरुलाई नछुने सर्तमा अख्तियार प्रमुख बनाएको चर्चा चलेको थियो , आज पनि छ नि ?
बजारका हल्ला पछाडि नलाग्नुस् । बजारमा अनेक चर्चा चल्छन ।
अख्तियारले माओवादी शिविरको छानविन गर्ने भनेपछि तपाईहरुले कार्कीको चर्को आलोचना गर्न थाल्नु भयो , महाअभियोगको सार्थकता देशका लागि कि पार्टीका लागि ?
शिविरमा अनियमितता भएको छ भने छानविन गर्न कसैले रोकेको छैन । तर आग्रह पूर्वाग्रका आधारमा कसैलाई आरोप लगानु राम्रो होईन । कार्की पूर्वाग्रबाट ग्रसित छन् ।
असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहाल र कार्की बीचको भेट पछि, सबै कुरा मिल्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो , फेरि कुरा कहाँ विग्रिए छ ?
कुरा त्यसो होइन । पार्टी अध्यक्ष दाहलले कार्कीको कसुर बचाउन खोज्नु भएकै छैन । विधिसंगत ढंगबाट चल्न निर्देशन मात्र दिनु भएको हो ।
पछिल्लो चरणमा माओवादीका नेताहरुलाई अख्तियारले तान्दै छ ,भन्ने हल्ला चलेका बेला तपाईहरु तर्सिएर महाअभियोगमा जानुभएको त होइन ?
हामी उनीसंग किन तर्सिने । मुलुकमा उनले जे पनि गर्न पाउने अधिकार छैन । उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार उलङ्घन गरेका छन् ।
ए त्यसो हो भने अख्तियारले पार्टीहरुलाई छुदै न छुने ? त्यसो भने यस्ता निकाय किन चाहियो, खारेज गरिदिए भएन ?
कुरा त्यसो होइन । गणतन्त्रमा कोहि पनि सर्वेसर्वा हुन सक्दैनन् । कार्की सर्वेसर्वा हुन खोजेका कारण उनी माथि कारवाही आवश्यक परेको हो ।
प्रस्ताव पास भएन भएन ?
नहुने कुुरै छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार प्रमुख हुनका लागि कार्कीको योग्यतामाथि मुद्धा छ , अदालतले उनलाई अयोग्य ठहर गरेमा तपाईका पार्टी अध्यक्ष दाहालको नाक अनुहारमै रहला कि अन्त कतै ?
हेर्नुस् , लोकमानसंग तपाईले अध्यक्ष दाहाललाई धेरै जोड्नु भयो । उनलाई अख्तियारमा पुर्याउन देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु लागेका थिए । यसमा दाहालको मात्र गल्ती छैन । यो मुलुक अझै पनि अर्धऔपनिवेशिक छ । यो बुझ्न जरुरी छ ।